Kuzohlomula abangama-60 e-MUT kowase-ABSA | Eyethu News
USTHEMBISO Cele oyiProvincial Manager of Public Sector Banking kwa-ABSA, uKeketso Motsoene oyi Head Enablement kwa-Absa noDkt. Enoch Duma Malaza onguthishanhloko eMUT ngenkathi kwemukeliswa ngokusemthethweni isheke lika R3 (million) lomfundaze. Isithombe: Zoloh Guma.
Lo mfundaze uvuleleke kubafundi abangakwazi ukukhokhela izimfanelo zabo zokufunda ekubeni bengangeni kuhla lwabaxhaswa uNational Students Financial Aid Scheme (NSFAS) kanti kungokwesibili kulonyaka ukuba bamukele usizo oluvela kwabakwa-ABSA nokuqale ngonyaka odlule.
Ngokusho kukaBheki Hlophe okhulumela lesi sikhungo, sizonyukela kwabangama-60 isibalo labafundi abazothola lomfundaze kulonyaka njengoba beqale ngabangama-41 ngonyaka owedlule.
Uthe abafundi baqokwa ngokwemiphumela yabo emihle, okungakhethe mikhakha abafuna ukuyifundela futhi kube yilabo abangemukeleki ohlwini lweNSFAS.
Lo mfundaze ukhokhela abafundi abaphumelele ngokumangazayo ezifundweni zabo nokhokhela ukudla, izincwadi, indawo yokuhlala kanye niokufunda kulesisikhungo.
Ethula inkulumo yakhe uKeketso Motsoene oyi- Head Enablement yakwa –ABSA KwaZulu-Natali uthe:”Siyohlala sijabula ngokuthola ithuba lokweseka abafundi balesi sikhungo ngalo luhlobo.”
Uthe ngonyaka odlule bakhiphe izigidi ezingama-22 (R22 million), kwathi lesi sikhungo sathola ezintathu (R 3million) kanti kulonyaka bakhiphe eziyi-16 (R16.8million) kodwa i-MUT yathola imali efanayo neyangonyaka odlule.
Ebongela isikhungo uDkt Enock Duma Malaza onguthishanhloko waso uthe: “Siyabonga kakhulu. Siyisikhungo esincane esihlangabezana nezingqinamba ezinkulu, sisebenzela umphakathi ontulayo kanti into enjena ibalulekile kithina futhi yinkulu kakhulu.”
Ubonge ukwesekwa ngabakwa-ABSA ngokwesivumelwano abasisayindile seminyaka emithathu sezigigi eziyi-9 (R9million).